Ntinye Drone Na-aga Wepu N'oge na-adịghị anya? | Martech Zone
Nwalee teknụzụ ndị kachasị ọhụrụ bụ akụkụ dị egwu nke ọrụ m. M na-azụtakarị nkà na ụzụ nanị iji nye ya ule ma hụ na m na-aga n'ihu. Ọnwa ole gara aga, azụrụ m a DJI Mavic Air, ma nwalee ya na ndị ahịa ole na ole.
Adịghị m onye na-egwu egwuregwu, yabụ na m mara mma nchara n’azụ onye njikwa. Mgbe m nwalere ya na ụgbọ elu ole na ole, ọ tụrụ m n'anya otú ngwaọrụ ndị a si efepụ onwe ha. Ugbo mmiri ahụ na-apụ ma daa n'onwe ya, ga-agbaso oke ụlọ, ga-efegharị usoro iheomume, na ọbụlagodi ịgbaso akara aka.
Na drones ama inwe nnọọ elu, bụ nnyefe maka ire ere na ecommerce na-abịa n'isi nso? Ekwenyesighi m ya na ọ bụ. Ọ bụ ezie na nnyefe sitere na ụlọ ahịa na ụlọ nkwakọba ihe nwere ike ịbụ naanị nkeji oge ma nwee ike belata ụgwọ mbupu, enwere okwu ole na ole iji merie drones, gụnyere:
Nchedo Drone - drones nwere ike ịnwe igwe ma ọ bụ nrụrụ aka ndị ọzọ na ụgbọ elu. Ebe otutu nde ha na-efe n’otu obodo, anyi nwere imebi ihe na, ikekwe, oburu ihe ojoo nke onwe.
Nchegbu Nzuzo - obi abụọ adịghị ya na ụgbọ mmiri ọ bụla ga-edekọ usoro ọ bụla. Anyị dị njikere maka ịdekọ ihe niile anyị na-eme kwa ụbọchị? Amaghị m na anyị dị njikere maka nke ahụ.
Mmachibido ụgbọ elu - M bi nso a ọchịchị ọdụ, ya mere, e nwere ihe a n'uko ọ bụla ụgbọ elu na-ewe. Drones na-efe ala ga-eme mkpọtụ dị ukwuu. Drones na-efe elu nwere ike ịdị mkpa ịgafe gburugburu akara ala, ụlọ, na mpaghara anaghị efe efe. Anyị ga-arụ ọmarịcha okporo ụzọ… nke nwere ike ịdọrọ arụmọrụ nke nnyefe aka-na-ebe ma belata arụmọrụ drones ga-enwe na ikpeazụ mile.
McKinsey na-arụ ọrụ ụgbọ ala ndị kwụ ọtọ gụnyere drones anapụta 80% nke ihe niile n'ọdịnihu. Na 35% nke ndị na-azụ ahịa na-egosi na ha kwadoro echiche ahụ, o doro anya na iji drones na-ewu ewu.
Obi abụọ adịghị ya na nnyefe nke ụgbọ mmiri na-abịa, mana enwere ọtụtụ echiche na atụmatụ dị mkpa iji banye na nsogbu ndị a. Ihe omuma a site na 2Fụpụ, onye na-emezu mmezu ya, na-enyocha uru na ihe ịma aka ndị metụtara drones ibu ma gosipụta etu teknụzụ a nwere ike isi mebie nnyefe ikpeazụ.
Tags: dronennyefeuavugbo agha adighi agha